Izindaba - I-Mankeel electric surfboard W7 yethulwe ngokusemthethweni ngesizini yokuthengisa yasehlobo ka-2022
Njengenkampani yezobuchwepheshe esungula izinto ezintsha, ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho okunqwabelene embonini yesikuta sikagesi, sasungula futhi sathuthukisa elinye ibhodi elintantayo likagesi ngonyaka odlule eliletha injabulo eyengeziwe kubantu ---- I-Mankeel Electric Surfboard W7.
I-Mankeel W7 yamukela umklamo omusha odidiyelwe, ukubukeka okukhanyayo nokuncane, indawo ebushelelezi ehambisana nobuso bamanzi, iyenze ihambe kahle emanzini, futhi kulula ukuyithwala, ukujula kwe-diving kufika ku-50m, okukuvumela ukuthi ujabulele ngokugcwele okuhlukahlukene. indawo engaphansi kwamanzi. Kumahhala ukuhamba emanzini ngisho noma ungeyena umbhukudi onekhono.
Impilo ende yebhethri ngemva kokushajwa ngakunye okugcwele kufika emaminithini angu-60, futhi idizayini yebhethri ye-IP68 ekhiphekayo engangeni manzi futhi ikulungele ukushintsha ibhethri noma ukuyishaja kabusha.
Chofoza kuvidiyo engezansi ukuze ubuke ezinye izikhathi zokuzijabulisa zamanzi ze-W7
Le vidiyo iyimpendulo yevidiyo yokuhlola engaphansi kwamanzi yekhasimende lethu laseRussia. Ikhasimende lethu liphinde lenza into entsha esekelwe embaleni wokuqala futhi ladaya ibhodi elintantayo laba nombala opholile kakhulu womugqa wamanzi. uma uneminye imiklamo yemibala yokubukeka, thina, njengefekthri esebenzayo, singakwenzela yona.
Iqoqo lokuqala lemikhiqizo emisha yaleli bhodi lokuslayida likagesi lizoqedwa ngokusemthethweni maduzane futhi lizokhululwa ukuze lithengiswe, ukulungiselela ukuthengiswa ehlobo lonyaka ozayo ka-2022. inani lethu lamanje lokukhiqiza iqoqo lokuqala lingamayunithi angu-300 kuphela. Siyakwamukela ukuthintana nathi ukuze ufake i-oda.